The Ab Presents Nepal » पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशिफल!
पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशिफल!
मिनः– विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिने छैन । कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला । कारोवारमा चनाखो रहनुहोला । वोलीको प्रभाव थोरै पर्नेछ । प्रयत्नहरु सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा कम हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा एक पटक सोचेर गर्नु होला । नोकरीबाट सन्तुष्टि मिल्ने छैन’|
प्रकाशित मिति June 13, 2019